အရေပြားအနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်မျက်နှာဖုံးများ - Frantz Fanon - Afrikhepri Fondation
Black ကအရေပြား, အဖြူရောင်မျက်နှာဖုံး
Pရေအနက်၊ အဖြူရောင်မျက်နှာဖုံးများကရေးသားတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ် Frantz Fanon နှင့် Seuil အတွက်ထုတ်ဝေသော 1952။ အဆိုပါစာအုပ်ကနေကိုးကားနှင့်အတူဖွင့်လှစ်AiméCésaire (ကိုလိုနီခတျေအပေါ်ဟောပြောချက်). ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ယုတ်ညံ့ခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ ဒူးထောက်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊
ဒါဟာဘာလဲဆိုတာ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေ, တစ် ဦး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအောင်၏မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ကိုလိုနီစနစ် လူသားတို့အတွက်အမွေအနှစ်အဖြစ်ထားခဲ့ပြီး၎င်းသည်လူမည်းနှင့်အဖြူအကြားဆက်နွယ်မှုမှစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားမှုအားဖြင့်ဖန်ဆင်းသောအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုလုံးအစုံဖြစ်ပြီး, ထိုအဘို့ပထမ ဦး ဆုံးအခနျး၏အခြေခံထားတယ် ဘာသာစကားဝေါဟာရအတတ်ပညာ။ Fanon သည်ကျောင်းသားတစ် ဦး အနေနှင့်ဆရာ ၀ န်အနေနှင့်သာမကခေတ်ပြိုင်စာပေသက်သေခံချက်များအရသူရရှိခဲ့သောအတွေ့အကြုံများကိုတစ်ဖက်အပြန်အလှန်လှည့်ဖျားသည်။Senghor, Césaire, မာယော့တ် Capecia... ) နှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်ဒphilနပညာရှင်များ၏ဆန်းစစ်ခြင်းများ (ဆတ်, mais စတေးလျ မိုက်ကယ် Leiris, ဇော့ Mounin,မာရီ Bonaparte, အဲဖရက် Adler) ။ သူ့စာတမ်းကိုလိုနီခေတ်စွန့်ပစ်ရမည်ဖြစ်သည်သည့်စုပေါင်းထဲတွင် Neurosis ဖန်တီးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတခုတခုအပေါ်မှာအသိအမြင်ခွင့်ပြုရန်အပေါငျးတို့သအလွှာကိုဖော်ပြထားတယ် အနောက်အင်ဒီးယန်း ဒုတိယအနေဖြင့်လူမည်းအာဖရိကနှင့်အဖြူရောင်ပြင်သစ်တို့ဖြစ်သည်။ ဤတိုတောင်းသောအလုပ်သည်ပြင်သစ်၌အနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေးစာပေများတွင်အရေးပါသည်။ အထူးသဖြင့်အခန်း ၆ နှင့်နိဂုံးတွင်ကဗျာနှင့်ဆင်တူသောအရူးအမူးအော်ဟစ်ခြင်း၏အမှန်တရားကို ပို၍ သိသာထင်ရှားစေသည် Leon Gontran Damasပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအတိုင်းအတာများနှင့်နည်းစနစ်များဖြင့်တိုးတက်လာမည့်သူ၏ဘာသာစကားနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်သည်ထက် အနောက်အိန္ဒိယမိန့်ခွန်း ဃ ''Edouard Glissant သောဤအလုပ်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းထားသည်။
ဤစာအုပ်တွင် Fanon သည်မည်သည့်အရာ၏“ ဖျက်ဆီးခြင်း” ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်စိတ်ဝင်စားသနည်း။ တစ်ဦးစိတ်ပညာဖြစ်တည်မှု complexus ၏ Cake "သောကြောင့်၏" အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်လူမျိုးအတူတကွဆောင်ခဲ့ »14 အတိုချုပ်ပြောရလျှင်သူသည်လူဖြူများနှင့်လူမည်းများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။ ကိုလိုနီခေတ်ဆက်နွယ်မှုကိုကျွေးမွေးသောဒဏ္ofာရီများ (ဥပမာ - ထိုအချိန်ကသိပ္ပံနည်းကျလက်ရာများမှတစ်ဆင့်အပါအ ၀ င်၊ ဥပမာအားဖြင့်အဆင့်မြင့်သိပ္ပံပညာရှင်များအနက်မှ“ အနက်ရောင်” တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသောညံ့ဖျင်းခြင်းရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ဆက်စပ်သော)၊ သူတို့ကထိုအချိန်ကကျယ်ဝန်းသောနေ့ခင်းတွင်ပေါ်ပေါက်လာသည့်“ လူမျိုးများ” ၏ဆက်ဆံရေးကို ဦး စီးသောအဆင့်ဆင့်၏မျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာယန္တရားများကိုနားလည်ခြင်း (နှင့်ယနေ့ခေတ်တွင် doxa ၏ကောင်းမွန်သောထိုင်ခုံ၏ဖိစီးမှုအောက်တွင်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံကြရသည်) လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်ကျပေမယ့်တကယ်တော့ဒီရှပ်အင်္ကျီအောက်မှာမဖယ်ရှားနိုင်သေးပါ။
ဤစာအုပ်သည်ကိုလိုနီစနစ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အဖျက်စွမ်းအားတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေးနှင့်အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုများကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိအမေရိကန်များအတွက်အချိန်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ။
Fanon ကအဖြူရောင်ကိုလိုနီစနစ်သည်၎င်း၏ပျက်စီးယိုယွင်းမှုအား၎င်း၏သားကောင်များ (လူမည်းများ) ကိုဖျက်စီးပစ်ရန်ဟူသောအချက်ကို၎င်းတို့အား၎င်း၏ပုံပျက်တန်ဖိုးများနှင့်ကိုက်ညီစေရန်တောင်းဆိုထားသည်။
ဤစာအုပ်တွင်သူသည်အလွန်အရေးကြီးသောမေးခွန်းများနှင့်လတ်တလောဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများတွင်တွေ့နိုင်သည့်ကျွန်စနစ်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သို့မဟုတ်“ လူဖြူ” ကိုအပြစ်တင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်း၏အဓိကအချက်များကိုလည်းသူဖော်ပြခဲ့သည်။ Bruckner မှဖော်ပြချက်ကို "လူဖြူ၏နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း" ၏အတိုကောက်ဖော်ပြချက်သို့မဟုတ်သားကောင်ယှဉ်ပြိုင်မှုစသည်တို့ကိုဆွေးနွေးငြင်းခုံသည်။
စာအုပ်တွင်သူနေထိုင်သောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏နက်ရှိုင်းသောခံစားချက်ကိုရိပ် မိ၍ ကိုလိုနီအဖြစ်ခံယူခဲ့သည်။ အခြေအနေအပေါ်သူ့အားပြis္ဌာန်းထားသော်လည်းသူသည်မိမိကိုသော့ခတ်ထားသည့်အရာကိုရွေးချယ်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ "ကွဲပြားခြားနားစွာ" နေထိုင်ရန်သူ၏မျှော်လင့်ချက်များရှိသော်လည်းတိုက်ပွဲနှင့်တိုက်ပွဲကိုသူ့အပေါ်ချမှတ်ထားပြီးနောက်ဆုံးတွင် "ရင်ဆိုင်နေရသောတစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှု" လူသား၏ကျရှုံးခြင်း " ထို့ကြောင့်ဤသို့ဆိုကြသည် - တဦးတည်းတာဝန်။ သူ [မိမိ] လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတဆင့် [မိမိ] ရွေးချယ်မှုမငွငျး "။
ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ / ကိုလိုနီခေတ်ဆက်နွယ်မှု - မခွဲလို့မရတဲ့ကံကြမ္မာ
စောစောစာအုပ်ထဲတွင် " Black ကအရေပြား, အဖြူရောင်မျက်နှာဖုံး »သူကပုံတူများဆက်တိုက်ရေးဆွဲသည်။ အနက်ရောင်နှင့်အနောက်အာဖရိက၏ဘာသာစကားနှင့်ပတ်သက်မှု၊ မက်ထရိုပိုလစ်စ်၏ပုံသဏ္toာန်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ပုံတူများရေးဆွဲခဲ့သည်။ "အဖြူရောင်လူ" သို့မဟုတ် "အဖြူမိန်းမ" နှင့်သူ၏ဆက်ဆံရေးတွင် "အရောင်ရှိသောမိန်းမ" သို့မဟုတ် "အရောင်ရှိသောယောက်ျား" ၏။
ထို့ကြောင့်သူသည်သူအားဤဆက်ဆံရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်များကို“ လှုပ်” ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဘာသာစကားကိုအဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်ကိရိယာတစ်ခုအနေနှင့် (အဖြူနှင့်အနက်ရောင်နှင့်ကွဲပြားသော "ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကြားခံ" များအကြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ဦး စားပေးခြင်းအတွက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်) လူမျိုးရေးနှင့်လူမှုရေးအရတည်ဆောက်ထားသည့်အမျိုးအစားနှစ်ခုလုံး)၊ ဒါ့အပြင်ကြီးစိုးသူ၏သဘောထားကိုတည်ဆောက်ပုံနှင့်အဖြူရောင်ထက်အဖြူရောင်ဖြစ်လာစေရန်ရှုပ်ထွေးသောရှုပ်ထွေးသောရှုပ်ထွေးမှုများ။
ဒါဟာ "အနက်ရောင်" ၏ပုံတူ၏ဒြပ်စင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် , ထိတျလနျ့တုနျလှုနှင့်အဖြူသည်အရှင်မတိုင်မီအရှက် »17, စသည်တို့, သို့မဟုတ်, သို့သော်, အေ၏လုပျငနျးကိုဆင်တူသော "အဖြူ" Memmi (သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်ပိုမိုစနစ်တကျရှိလိမ့်မည်) နှင့်၎င်းသည်အဖြူနှင့်အနက်ရောင်ကြားတွင်သူဆန့်ကျင်ခဲ့သည့်ဖွဲ့စည်းပုံ - "အဖြူသည်၎င်း၏အဖြူရောင်ဖြင့်သော့ခတ်ထားခြင်း" နှင့် "အနက်ရောင်သည်အနက်ရောင်တွင်သော့ခတ်ထားခြင်း" ဖြစ်သည်။ ။
ထို့ကြောင့်“ negro” သည်“ အဖြူ” ၏မျက်လုံး၌“ အနက်ရောင်” နှင့်“ လူမည်း” များ၏မျက်မှောက်၌သူ၏ပုံရိပ်ကိုရှာဖွေနေသော“ လူမည်း” နှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်ပြီးထို့ကြောင့်ရုပ်ပုံတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ သူ့ဟာသူ၏ '' အရောင်ချွတ်။ "အဖြူ" မှတည်ဆောက်ထားသည့် "အနက်ရောင်" ၏ပုံစံတစ်မျိုးအပေါ်ပုံဖော်ထားသည့်ပုံ။ ဒီရှာဖွေမှုက“ အနက်ရောင်” ကိုဒီအလယ်အလတ်နေရာဆီသို့ ဦး တည်သွားနိုင်ပါတယ်။ “ အဖြူ” ဆီသို့“ တက်” ဖို့ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်သူဟာအမြဲတမ်းယုတ်ညံ့တဲ့နေရာကိုသာရောက်နိုင်တယ်၊ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သူ့ကိုယ်သူကိုယ်ထည်တစ်ခုတည်းကိုသာ ဦး တည်သွားစေလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာဆစ်စဖှက်၏ဒဏ္onာရီကိုထိခြင်းမရှိသောယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်အနောက်အင်ဒီးယန်းများအားအဖြူရောင်ပုံသဏ္reachာန်ကိုမရောက်ရှိနိုင်ဘဲပိုမိုနက်ရှိုင်းလာစေရန်တွန်းအားဖြစ်စေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးနှင့်အတူတူပင်အားဖြင့်အနက်ရောင်၏ပုံသဏ္ဌာန်ကိုပယ်ချခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
လူသား၏ဒေဝါလီခံခြင်းကလူဖြူလူဖြူသည်သူ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြုကျင့်ရန်နှင့်လူမည်းလူမျိုး၏လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအားဖြင့်သူ့အားမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ကိုလိုနီလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုကျဆုံးစေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ချည်နှောင်ထားသည့်လက်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းသည်၎င်းကိုသတ်မှတ်ထားသောနေရာတစ်ခုသို့သတ်မှတ်ပေးသောယန္တရားများနှင့်ဆန့်ကျင်သည် - မိမိကိုယ်ကိုပရောဂျက်လုပ်ရန်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုယူဆရသော“ အဖြူရောင်” ကိုရောက်ရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။ လက်လှမ်းမမှီ
ဤသည်ကိုဖကျြဆီးသူသညျမိမိအလုပ်၏ကျန်အတွက်နောက်ပိုင်းမှာဖွံ့ဖြိုးပါလိမ့်မယ်တူညီဆောင်ပုဒ် colonizing လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဖျက်ဆီးခြင်း၏အစေ့သမုတ်သော။
နောက်ဆုံးတွင်သူသည်ဤနေရာတွင်ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ခြင်းကင်းမဲ့သည့်သီအိုရီဖြစ်လာမည့်အရာ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ Fanon ၏အခြေခံအကျဆုံးပံ့ပိုးမှုဖြစ်သည်။ ယုတ်ညံ့ရှုပ်ထွေးသောရှုပ်ထွေးသော, မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့မှုနှင့်အကူအညီမဲ့နေသည့်ခံစားမှု။ ထိုအချိန်မှ စ၍ ကိုလိုနီခေတ်သည်သာလွန်ရှုပ်ထွေးသောကိုလိုနီနယ်မြေမှသာအတွင်းပိုင်းအတွင်းမှသာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးစွမ်းအင်ရှုပ်ထွေးမှု၏ပြwhichနာကိုအများဆုံးတွေ့နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ယဉ်ကျေးမှု၏လုပျငနျး၏အရေးပါမှုကို။
ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အယ်လ်ဂျီးရီးယားကိုလိုနီလက်အောက်မှလွတ်မြောက်ခြင်း၏ဥပမာကိုစဉ်းစားပါကထိရောက်သောကိုလိုနီခေတ်ကုန်ဆုံးချိန်သည်ပြင်သစ်နှင့်အယ်လ်ဂျီးရီးယားတို့ရှိကိုလိုနီဆက်နွယ်မှု၏အဆုံးမဖြစ်လာနိုင်ပါ။ အမှန်စင်စစ်အယ်လ်ဂျီးရီးယားတွင်နှစ်ပေါင်း ၁၃၀ အတွင်းလူဖြူများနှင့်လူမည်းများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သောကိုလိုနီဖြစ်ခြင်း (ကိုလိုနီနယ်မြေများကိုကိုလိုနီနယ်ချဲ့များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရှေးဟောင်းအစဉ်အလာသတ်မှတ်ခြင်းကဲ့သို့ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရသည်) ။
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းကိုလိုနီနယ်ချဲ့မှုအတွက်ကိုလိုနီအစီရင်ခံစာ၏ထုတ်လုပ်မှုသည်မိမိကိုယ်ကိုမုန်းတီးခြင်းထက်သာလွန်သည်၊ အနောက်အင်ဒီးယန်း၏အစီရင်ခံစာတွင် Fanon က“ အနက်ရောင်အသားအရေ၊ အဖြူရောင်မျက်နှာဖုံးများ” တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဘာသာစကားဟာသူတို့ရဲ့ပုံသဏ္inာန်နဲ့အနက်ရောင်ပုံသဏ္thatာန်၊ အဖြူနဲ့တူအောင်လုပ်ချင်တဲ့အရာ၊ အရာ - "အနက်ရောင်" ကြားဆက်ဆံရေး - အရပျ၌အဖြူ "၌အန္တာလ်လန်း၏တိကျသောသမိုင်းမှတဆင့်အထွတ်အထိပ်ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွန်း။ ရောနှောစုံတွဲများအကြားထူထောင်ထားသည့်ဆက်ဆံရေးတွင်လည်းလူမည်းနှင့်လူဖြူအမျိုးသမီးများအကြားလိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြောင်းလဲခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နေရသည်။
ယခင်ကသူ့ကိုဖြူပေးသည်သောပုံရိပ်မှကိုက်ညီနိုင်စွမ်းညွှန်ပြ, ဒါမှမဟုတ်အခါရည်ရွယ်ချက်အခြေအနေများသူ့ကိုတုပဖို့ရန်ကြိုးစားသကဲ့သို့, လူမျိုးရေးခွဲခြားနိုင်ရန်တီထွင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထားကိုလိုနီလွှမ်းမိုးမှုအားဖြင့်, ထို့ကြောင့်ကိုလိုနီပေးထား သူ့ကိုခွင့်ပြု
ဒါကြောင့်သူကလိုက်နာနှင့်ဤလိုက်နာမှု Self-ထုတ်လုပ်ပေမယ့်လည်းမဆိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဝိသေသလက္ခဏာများ၏အဖျက်ဖြစ်ပါသည်, သူမအင်္ဂတေ၏သဘောထား၎င်း၏ထှတျအထိပျကိုရှာ, ဒါမှမဟုတ်ပင်မမြင်ရတဲ့ပေါ်လာပါသည်။
ထို့အပြင်သူသည် (မသိစိတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သတိပြုမိသည်ဖြစ်စေသော်လည်းကောင်းသူသည်ဆက်နွယ်မှုရှိအရာအားလုံးကိုကြားမှဖြစ်စေ၊ အခြေအနေတစ်ခုအနေဖြင့်ဖြစ်စေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်) ရွေးချယ်မှုကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကို (မိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းယန္တရားတွင်) ဆန့်ကျင်။ သို့မဟုတ်အခြားသူများဆီသို့လှည့်နိုင်သည် (သို့သော်၎င်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်သည်။ ) ထို့ကြောင့်အကြမ်းဖက်မှုသည်ပထမဆုံးအကြိမ်တုံ့ပြန်မှုနှင့်လွှမ်းမိုးထားသည့်နေရာကိုငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ပုန်ကန်ရန်မဖြစ်နိုင်ဟူသောအယူအဆဖြင့်၎င်းသည်ပထမအကြိမ်အသိအမြင်ဖြစ်သော်လည်းမျှော်လင့်ချက်မရှိဘဲဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်သူသည်သတိပုန်ကန်မှုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထိုအချိန်ကတည်းကသူသည်နိုင်ငံရေးဖြစ်သည့်ပုန်ကန်ရန်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဖြေရှင်းချက်များဖြစ်နိုင်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းဖြင့်အသိပညာသည်တစ် ဦး ချင်းအားသာမကစနစ်ကိုတိုက်ခိုက်သည်။ ဤအသိအမြင်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အောင်မြင်မှုအားလုံး၊ အမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သောရှုံးနိမ့်မှုများအားလုံးဖြင့်မှတ်သားနိုင်ဆဲဖြစ်သော်လည်းလုပ်ငန်းစဉ်အသစ်၏အစကိုမှတ်သားနိုင်သည်။
ကိုလိုနီနယ်ချဲ့မှုသည်သူ၌လွတ်လပ်ခွင့်မရှိသောကြောင့်၎င်းသည်လွှမ်းမိုးမှုမရှိပါက၎င်းကိုချည်နှောင်ထားခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်ဖြစ်သည်။ သူကစားသည်နှင့်သင်္ကေတလုပ်ရပ်နှင့်ကြီးစိုးသေဆုံးခြင်း၏အခြေအနေများကိုပြန်လည်ပြဌာန်းခဲ့သည်။ “ လူမည်း” သည်သူ၏ဘ ၀ ၏အမှန်တကယ်၊ သူ၌အမှန်တကယ်ရှိသည့်ဘဝ၊ သေခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဘဝနှစ်ခုလုံးနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဤအဖြစ်မှန်များ၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု၊ စိတ်ဆင်းရဲမှု၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ စိတ်ပျက်စရာ - သူသည်ဤနည်းအားဖြင့်သူရူးသွပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူ၏အိပ်မက်များနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ၊ လွတ်လပ်မှုများ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်လိုသောဆန္ဒများစသည်တို့ကိုကခုန်နေသည်။
ကခုန်ခြင်းသည်ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ခံရသည့်ဆင်းရဲဒုက္ခများ၏ဒဏ်ရာကိုတုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကခုန်ခြင်းသည်ကိုလိုနီ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုသိမ်းယူသည့်အာရုံကြောကိုတုန့်ပြန်စေသောဗေဒဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကာကွယ်ရေး၏တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဤစစ်ဆင်ရေး၏ထင်ရှားပြမှုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အကသည်ရှင်သန်မှုအတွက်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Heidegger ကပြောကြားရာတွင်၎င်းသည်လူတစ် ဦး အားဂရုစိုက်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခြင်းကိုစီစဉ်သည်ဟုဆိုသည်။ Negro သည်ကခုန်ခြင်းဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုနေထိုင်ပြီးကခုန်ခြင်းဖြင့်လွတ်လပ်သောလူသားတစ် ဦး အဖြစ်နေထိုင်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး, ကခုန်ပစ္စည်းများတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကိုလိုနီခေတ်အလို့ငှာငှါ, ကိုလိုနီ, တင်သွင်းခဲ့တဲ့, ကှာနှင့်စုစုပေါင်းအတည်ပြုချက်ကို၏အဆုံးဖြစ်ခြင်း၏စုစုပေါင်းပျောက်ဆုံးငြင်းဆန်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ထို့ကြောင့်ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်များနှင့်တုံ့ပြန်မှုအဆင့်များအကြောင်းကိုသူ၏အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေးရုန်းကန်မှုနှင့်ကိုလိုနီခေတ်လွန်ကာလကိုလိုနီတိုက်ဖျက်ရေးတွင်မည်သည့်အရေးပါမှုကိုနားလည်ရန်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအသိပညာဗဟုသုတနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပုန်ကန်မှုတို့၏မေးခွန်းများကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်တင်းရန်မလွယ်ကူပါ », Abdelmalek Sayad ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအရသိရသည်အသိပညာ၏နေရာများလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ တင်းကြပ်သောမာက်စ်ဝါဒီအမြင်နှင့်လူတန်းစားရုန်းကန်မှု၏ရှေးရိုးစွဲဝေါဟာရများအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်မလုံလောက်သေးပါ။ မတူကွဲပြားသောလွှမ်းမိုးမှုပုံစံ (အတန်း၊ ကျား၊ မနှင့်ကိုလိုနီခေတ်) ၏တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မတိမ်းမယိမ်းဖြစ်ခြင်းနှင့်အရေးပါမှုတို့ကိုစည်းရုံးရန်လိုအပ်သည်။ ဖိနှိပ်ခံရသူများနှင့်ဖိနှိပ်ခံရသူများကိုခွဲခြားရန်။
ကျန်ရှိသောစဉ် Fanon ကြိုတင်မဲအတွက်ကိုလည်းရှုတ်ချ, ဤသည်သူ၏ပဉ္စမအခြေခံအလှူငွေဖြစ်ပါသည်, ထိုဘေးဥပဒ်ကိုရိုးရိုးအနက်ရောင်နှင့်အာဖရိက bourgeois အားဖြင့် bourgeois အဖြူသခင်အစားထိုးအာဖရိကရဲ့ကိုလိုနီခေတ်လွန်ကာလလူအမျိုးမျိုးအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်, အရင်းရှင်ဖိနှိပ်မှု။
လွတ်လပ်ရေး၏ကျိန်စာမှသူသည်ထို့ကြောင့်သူသည်နောက်ဆုံးတွင်, လူထုသူတို့ရဲ့ praxis ဆင်ခြင်တုံတရားမှတစ် ဦး တည်းစီမံခန့်ခွဲမရနိုငျသောကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဆီသို့တိုးပါလိမ့်မယ် - ကွန်ဂိုထု၏ဥပမာအားဖြင့်သူ့ကိုဒြပ်စင်ပေးခြင်းဤလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သူတို့ဘာမျှမရှိသည်ဟုအခိုင်အမာ။ ယခင်ကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့ဖူးသူများနှင့်အချို့သောအထက်တန်းလွှာများ၏ကြံဆမှုများကိုဆန့်ကျင်။ ရနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် Fanon သည်ကိုလိုနီနယ်ပယ်၏သိစိတ်ကိုနိုးထစေသည်၊ ကိုလိုနီစနစ်၏တည်ဆောက်ပုံ၏အတိုင်းအတာကိုလူတိုင်းအားထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ (ဟူသောဝေါဟာရ၏အဓိပ္ပာယ်အားလုံးတွင်) လမ်းကိုပြသသူ၊ သူတို့နှင့်အတူ…
လူမည်းအပေါ်အဖြူသာလွန်မှု (နှင့်ယင်း၏တစ်ဖက်ဖက်၊ အနက်ရောင်ညံ့ဖျင်းခြင်း၏ခံစားချက်) သည်အနောက်နိုင်ငံများလူ့အဖွဲ့အစည်း (အထူးသဖြင့်အနောက်အင်ဒီးစ်) တွင်အချက်တစ်ခုဖြစ်နေဆဲပင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်မှအကျိုးဆက်များကိုလေ့လာပါမည်။ ကိုလိုနီစနစ်မှမွေးဖွားလာသည့်အခြေအနေနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါ Negro ၏တုံ့ပြန်မှုများကဘာလဲ။ “ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက Negro ကိုကိုလိုနီခေတ်ကပေါက်ဖွားလာတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အာဆင်နယ်အသင်းကနေလွတ်မြောက်အောင်ကူညီဖို့ပဲ” (Ed du Seuil, p24)
1 ။ အနက်နှင့်ဘာသာစကား
ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်သော Negro (Martinican) သည် "မျိုးရိုးဗီဇ" ပြောင်းလဲမှုကိုကြုံတွေ့ရသည်။ သူကပြင်သစ်ဘာသာစကားကိုလက်ခံပြီးကရင်ပိုလူမျိုးကိုငြင်းပယ်သည်။ ဆတ် တွင် negro နှင့်အာလာဂါစီကဗျာ၏ပေါင်းချုပ်တွေလည်း။ ပြင်သစ်စကားပြောခြင်းသည်အဖြူရောင်ဖြစ်ရန်၊ လူဖြူများ၏ကမ္ဘာကြီးကိုသိမ်းသွင်းရန်ဖြစ်သည်။ White ကသူသည်ပင် Black ကိုမြင်သောအခါ Negro အနည်းငယ်ကိုအသုံးပြုသည်။
2 ။ အရောင်နှင့်အဖြူအမျိုးသမီး
မာယော့တ် Capecia dans သား Roman ငါမာတီနစ်ဖြစ်ကြောင်းကို လူဖြူတွေအတွက်ဒီနုံဆွဲဆောင်မှုကိုပြသတာကအဖြူရောင်ဖြစ်နေလို့ပါ။ လူမည်းသည်အတ္တကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသည့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခု (အန္န Freud), "သူသည်သည်းမခံနိုင်သောအထီးကျန်အဖြစ်ကန့်သတ်ထားရာလူ့သဟာယအားလုံးအတွက်မစွမ်းဆောင်နိုင်မှု" (p40) နှင့်သာအဖြူနှင့်အတူပြည်ထောင်စုအတွင်းပြေလည်သည်။ mulatto သည်လူမည်းတစ် ဦး နှင့်လက်ထပ်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးမှာအထူးသဖြင့်သူ၏အရေအရောင်သည်။
3. အရောင်က Man နှင့်အဖြူ
René Maran ၏ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိရေးသောဝတ္ထုတွင်လူမည်းလူမည်း Jean Veneuse တွင်သူ၏မိဘများကပြင်သစ်နိုင်ငံမြို့တော်သို့စွန့်ပစ်ခံထားရသောကြောင့်သူသည်သူ၏ယုတ်ညံ့မှုနှင့်အထီးကျန်ဆန်မှုခံစားချက်အတွက်အလွန်အကျွံလျော်ကြေးပေးနိုင်ခဲ့သည် ပညာရေးထူးချွန်မှုဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ သူမ၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သည့်သူ၏အစ်ကိုထံမှခွင့်ပြုချက်မတောင်းဘဲသူမကိုချစ်သောလူဖြူအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ဆက်ဆံမှုကိုစတင်ဝံ့ဝံ့ခြင်းမရှိပါ။ နောက်ဆုံးတွင်သူသည်အဖြူပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောလိင်ဆိုင်ရာဒဏ္inာရီထဲ၌အခြားသူဖြစ်ခြင်း၏အိပ်မက်ကိုခိုလှုံခဲ့သည်။ ထိုအခါမူကားသူသည်မိမိ၏ယုတ်ညံ့မှုကိုအမြဲခံစားရလိမ့်မည်။
4 ။ ဒါခေါ်ကိုလိုနီခေတ်စွဲရှုပ်ထွေးသော
Mannoni ၏လေ့လာမှုများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညွှန်ကြားရန်လိုအပ်ခြင်းနှင့်အနာဂတ်ကိုလိုနီတွင်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သော“ ယုတ်ညံ့ခြင်းအဟာရ” များအကြောင်းပြောကြသည်။ ဤအရာကိုဆန့်ကျင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိူင်ငံရေးနိမ့်ကျမှုခံစားချက်၏မူလအစသည်တရား ၀ င်ဟောပြောချက်ကြားမှကိုလိုနီလူမျိုးများ၏လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမှဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသက်သေအထောက်အထားကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်သည်အထိကျွန်ုပ်တို့သည်ပြproblemsနာများစွာကိုဘေးဖယ်ထားလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့် (... ) ဆိုရလျှင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသည်နိုင်ငံ၏လက်အောက်ခံများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပြင်သစ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အနည်းဆုံးလူမျိုးရေးခွဲခြားသောနိုင်ငံဖြစ်ပြီး၊ မှန်ကန်စွာစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းမရှိသောအမျိုးသားများ၏အလုပ်ဖြစ်သည်။ ) ။ “ ဥရောပသည်လူမျိုးရေးခွဲခြားသောဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်” (p69) နှင့်ကိုလိုနီလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည် Mannoni ၏လေ့လာမှုများကအထူးသဖြင့် Malagasy အိပ်မက်များ၏ထပ်ခါတလဲလဲပုံရိပ်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Senegalese ရိုင်ဖယ်သမားသည်သူပုန်များကိုနှိမ်နင်းခြင်းသို့မဟုတ်ကုန်သည်ရောင်းဝယ်သောလူဖြူကုန်သည်၏ပုံကိုဖော်ပြသည်။
5. Negro ၏နေထိုင်ခဲ့အတွေ့အကြုံကို
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသည်အမှန်တကယ်တည်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်စေနိုင်သောအတွေ့အကြုံများစာရင်းဖြစ်သည်။ လမ်းပေါ်ရှိလူများ၏အသွင်အပြင်နှင့်ကလေးများ၏မှတ်ချက်များ၊ လူမည်းများ (ရိုင်းစိုင်းခြင်း၊ လူသားစားခြင်းစသည်ဖြင့်)၊ လူခပ်သိမ်း၏လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များ။ ဖောက်ကူးခြင်း၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု, အများ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇရှင်းလင်းချက်နှင့်ဆက်စပ် nigritude Senghor နှင့်အတူအနက်ရောင်စိတ်ခံစားမှုနှင့်အဖြူရောင်အကြောင်းပြချက်များပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤစိတ်ဓာတ်ကိုလူဖြူများအလျင်အမြန်တုန့်ပြန်ကြသည်မှာအနောက်တိုင်းကမ္ဘာ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်သမိုင်းဝင်အဆင့်သာဖြစ်သည်။ ငါအာဖရိကသမိုင်း၏ရှေးဟောင်းကိုရှာလျှင် (Frobenius, Westermann, Delafosse), လူဖြူငါ့ကိုသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၏လက်ရှိတိုးတက်မှုဆန့်ကျင်။ နောက်ဆုံးတော့, ဆတ် dans သား အနက်ရောင် Orpheus Negritude သည်မိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲအဆုံးလည်းမဟုတ်၊ အဆုံးလည်းမဟုတ်၊
6 ။ အဆိုပါ Negro နှင့်စိတ်ပညာ
အင်တီးလ်များနေထိုင်သူများအတွက်စုပေါင်းထားသော“ catharsis” သည်အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ကားများ (သို့) အင်ဒီးယန်းလူမျိုးများနှင့်ပြင်းထန်သောလူမည်းများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအဖြူရောင်သူရဲကောင်းများ၏ရုပ်ပြများဖြစ်သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူအားလေးစားမှုရှိသည်။ အနောက်အိန္ဒိယသား ၉၇ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဖခင်အပေါ်ကျူးကျော်မှုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ Oedipus ရှုပ်ထွေးသော။ လူဖြူများ၏ဘေးထွက်တွင်ဉာဏ်ပညာဆည်းပူးမှုများသည်လူမည်းများအားစွပ်စွဲထားသောလိင်ဆိုင်ရာအလားအလာဆုံးရှုံးမှု၏ခံစားချက်နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ သူတို့အတွက်“ Negro သည်ဇီဝဗေဒ” (p135) ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဤသည်ကရန်လိုခြင်း၊ junk လူဖြူများ၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုအဖြူရောင်၏ထင်ရှားသောရှုထောင့်များကိုအနက်ဖွင့်ဆိုခြင်းပုံစံကိုလိုက်စားခြင်း၊ စုပေါင်းသတိလစ်၏ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှားယွင်းသောမဟုတ်ပါဘူး။ Sartre အားဖြင့်ဖော်ပြထားယုဒလူတို့လိုပဲ (anti-ဆီးမိုက်များနှင့်ယုဒလူ)တစ် ဦး တည်းကဂျူးဆန့်ကျင်ရေးကိုရှောင်ရှားဖို့ဂျူးဆန့်ကျင်ရေးဖြစ်လာနိုင်တယ်။ "ဒီ negro အပြစ်တရား၏သင်္ကေတကြောင်းကိုငါသဘောပေါက်လာသောအခါငါကိုယ့်ကိုယ်ကို negro မုန်း၏။ သို့သော်လည်းငါသည် negro ဖြစ်ကြောင်းကိုရှာပါ။ ဒီပconflictိပက္ခမှလွတ်မြောက်ရန်, ဖြေရှင်းနည်းနှစ်ခု။ ငါ့အသားအရေကိုဂရုမစိုက်ရန်အခြားသူများကိုငါတောင်းဆိုသည်; သို့မဟုတ်ပါက၎င်းကိုသတိပြုစေလိုသည် (း ၁၅၉) ။ သို့သော်ဤသဘောထား (၂) ချက်သည်လူဖြူများ၏တရားစီရင်ခြင်းကိုခြေရာခံသည်။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် Negro အတွက်လက်ခံနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောသဘောထားမှာဤသဘောထားများထက် ကျော်လွန်၍ Universal ကိုတိုက်ရိုက်လိုချင်ခြင်းဖြစ်သည်။
7 ။ အဆိုပါ Negro နှင့်အသိအမှတ်ပြုမှု
အဲဖရက် Adler အာရုံကြောစိတ်ထားက၎င်းသည်ပန်းတိုင်ကိုနားလည်ရန်၊ ၎င်းသည်အခြားတစ်ခု (ဆိုလိုသည်မှာအဖြူရောင်) ဖြစ်ပြီးသူတို့၏စိတ်ဓာတ်ကိုမိမိကိုယ်မိမိလေးစားမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းထက်အခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားရည်ညွှန်းသည်။ သမိုင်း၏ရှုထောင့်မှ၊ thesis-antithesis-synthesis အစီအစဉ်၏ Hegel လူဖြူများလူအခွင့်အရေးနှင့်သူတို့၏အခွင့်အရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေသည့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ Martinique တွင်လူဖြူများကလူများ၏တန်းတူညီမျှမှုနှင့်ကျွန်တို့၏လွတ်မြောက်မှုကိုစီရင်သောကြောင့်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ တိုက်ပွဲကမဖြစ်နိုင်ဘူး။
€ 14 ကနေ 8,25 အသစ်
6 12,59 €ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
€ 8,30 ကိုဝယ်ပါ
နောက်ဆုံးဇူလိုင်လ 28, 2021 4:37 pm တွင် updated
အောင်မြင်သောဘဝအတွက်လိုက်နာရန်စည်းမျဉ်း ၃ ခု
Home - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (၂၀၀၉)
ယဉ်ကျေးမှုသို့မဟုတ်ရိုင်းစိုင်းတဲ့သဘော - စစ်မှန်သောမနုologyဗေဒ